Soo dejisan Dolphin Browser 11.5.6 – Vessoft
Soo dejisan Dolphin Browser
Hoonbaro Browser – browser oo degdeg ah iyo functional si aad u eegto bogagga internetka. Hoonbaro Browser ayaa Dejinta in la beddelo asalka ah, waxa ay taageertaa .Wadashaqayntaas la Google Bookmark and gacanta la isticmaalo. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan tilmaamaha aan ku boodaan bogga la rabay ama in ay qabtaan hawlo kala duwan ee browser ah. Hoonbaro Browser ku jira qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan, daahsoon isticmaalka browser, hab habeenkii, dhirta aan soo degsado sawirada iyo aragtida screen buuxda. Software ayaa sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u baahiso fursadaha ay isku xidha daro.
Browser Fast iyo functional
Oolin marka Google Bookmark
Control la isticmaalo
Ku haboon hababka
Xiriirka of daro ah
Dolphin Browser Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Mozilla Firefox 40.0.3
العربية, English, Українська, Français... Yandex.Browser 15.6
Kadib browser Fast for dhirta web fudud. software The dedejisaa load bogga lagu jiro xiriir u gaabiyaa internet oo badbaadiyay bandwidth ah.
العربية, English, Українська, Français... UC Browser 10.7.0
English, Français, Español, 中文... Evernote 7.1.4
qabanqaabiyayaasha Tool si ay u abuuraan notes kala duwan ama liiska. Software wuxuu taageeraa .Wadashaqayntaas la xisaabtaada iyo helitaanka macluumaadka ku kaydsan ka qalab kala duwan.
English, Українська, Français, Italiano... Mail.Ru 3.1.3.1222
العربية, English, Українська, Français... Audible 2.3.1